အကြင်နာနန်းတော်: အမြင်ကောင်းဖို့ အကောင်းမြင်ကြည့်ခြင်း။
ဇာတိမရဏရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာက ဆန္ဒပြလာတဲ့ဒီအချိန်၆၀ ကျော် ၇၀နားကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ လို့အမေအိုတစ်ယောက်အတွက် အိမ်ကချွေးမ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမှစားနိုင်တော့တဲ့အချိန်မျိုး
ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အချိန် သားနဲ့ချွေးမ ဆင်မှ ၀တ်ရ စားရတဲ့ ဘ၀မျိုးမှာ
သားတော်မောင်နေ့စား အလုပ်ကပြန်မှ ချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးမွေးတဲ့ ချွေးမ ကြည့်စမ်းပါအုံး ။ မီးဖိုချောင်ထဲက တွတ်ထိုးနေတဲ့ သားတော်မောင်နဲ့ချွေးမတော် ရဲ့  အသံတွေက နားထဲခါးလိုက်ပါဘိကွယ်။
(မောင် ထည့်စားပါဆို ရော့ ကြက်ရင်အုံသားနော်)
(စားပါ ရှင်မလေးရယ်..ရော့ မောင်က လည်း ဒီပုဇွန်တုတ်ကြော်ကြီးကို မစားရက်တော့ဘူး ချစ်လေးစား)
(ဟွန်းးးးးးမောင်နော် မရပါဘူး မောင်က အလုပ်ကပင်ပန်းပြီးပြန်လာတာ ချစ်လေးမစားရက်ဘူး မောင်စား.
(ရော့ ဒါက မောင်အကြိုက်ဆုံး တုန်ယမ်းဟင်းရည် သောက်ကြည့် ကောင်းမှကောင်း)
(ဟားးးးတော်လိုက်တာ မိန်းမရာ ဒါကြောင့်ချစ်နေရတာ)
(မေမေ ခနစောင့်နော် သား ကြက်သားလေးဝယ်လာတယ်အမေ့ ချွေးမကိုကြော်ခိုင်းအုံးမယ်)တဲ့
သားတော်မောင်လက်ထဲက ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ ကြက်ပေါင်လေးတစ်ခြမ်း တော့လှမ်းတွေ့မိပါသေးတယ်
ခု ပုဇွန်ကြော်နဲ့ တုန်ယမ်းဟင်းရည်က ဘယ်ကပါလာရတာလဲ..
ကိုယ့်ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ ထမင်းတစ်ပန်းကန် ကြက်သားမွပြီးကြက်သွန်နီလေးနဲ့ စိုစိုလေးထောင်းကြော်တစ်ခွက်.အရည်
သောက်လားမသိ ကြက်သားပြုတ်ရည်ထဲ မုန်ညင်းရွက်ခတ်ထားတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်.
(ဦးဦးဖျားဖျား မေမေအရင်စား သားတို့နောက်မှ စားမယ် ရေချိုးအုံးမှာမို့နော် အမေ)တဲ့
မနက်နေ့ည တိုင်း သူတို့တူတူမစားကြတာ ဒါကြောင့်ကို.အသားကောင်းငါးကောင်းတွေကို
အမေအိုကြီးကိုကျွေးရမှာကြောက်လို့ တူတူမစားကြတာကို ကျေးဇူးတရားမသိတဲ့သားမိုက် .ဒီတစ်ခါတော့ သီးခံနေလို့
မရတော့ဘူး..မလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင် တော့လို့ ဘေးဖယ်ထားကြတာခံနိုင်တယ် ဒီလိုလူလည်ကြတာတော့ ရက်ဆက် သီးမခံ
နေ့စားလုပ်တဲ့သားကပါ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားကြရမှန်းသိပေမဲ့ အမေအိုကြီးမသိအောင်ခိုးစုထားတဲ့ပိတ်ဆံတွေနဲ့ သူ့မိန်းမကိုကျသိတတ်နေလိုက်တာများကွယ်။ကျွေးမေ မွေးမေ ကျေးဇူးတရားကိုမှမသိတတ်တဲ့ သားမိုက်.
ဒေါသစိတ်က ထိုင်းမရတော့။ ကျွန်မ ရှေ့လာချပေးထားတဲ့ ထမင်းဟင်းပန်းကန်ကို စားကြည့်ပြီးမြိုချလို့မရတော့ ။
သူတို့ လုပ်နေတာတွေ ဒီအမေအိုသိတယ် ကြားတယ်ဆိုတာ ပြမှဖြစ်တော့မှာမို့ ကျွန်မ ခြေလှမ်းကြမ်းကြမ်းနဲ့ မီးဖိုတံခါး
ပြောနေကြတာ တဟီးဟီး တဟားဟား ပလုပ်ပလောင်းစားနေကြတဲ့ အသံတွေက ကျွန်မအတွက် ငရဲခန်းတစ်ခုလိုပါပဲ။
(ဟင် မေမေ ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်)
(သားမိုက်..မဖက်လိုက်လို့မိုက်ဖက်ပါတယ်သားလူဆိုးကြီး ဒီအမေအိုကျတော့ ကျွေးရမှန်းမသိတဲ့သားမိုက် )
ကျွန်မလုံးဝစိတ်မထိုင်းနိုင်တော့ပါ မီးဖိုတံခါးကို ၀ုန်းကနဲ တွန်းကန်ဖွင့်ချလိုက်ပြီး
အားရှိပါးရှိ သားရဲ့နားရင်းကို ကျွန်မလက်ဝါးနဲ့ ရိုက်ချလိုက်ပြီး ချွေးမဆီတို့ ကျွန်မ လက်မရောက်ခင်..ကျွန်မ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ...မယုံနိုင်စရာပါလား..
သားနဲ့ချွေးမ စားနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းက မုန်ညင်းအရည်သောက်လေးတစ်ခွက် စားပွဲအလည်မှာချလို့ သူ့တို့ပန်းကန်ဘေးမှာငရုတ်သီးကြော်လေးနှစ်တောင့်နဲ့ ချွေးမ ထမင်းပန်းကန်ပေါ်မှာအသားမပါတဲ့ ကြက်ပေါင်းရိုးလေး တစ်ရိုးပါလား။။
ဘုရား ဘုရား ဘယ်မှာလဲ ပုဇွန်ကြော် တွေ တုန်ယမ်းဟင်းအရည်သောက်တွေ ကြက်ရင်အုံကြော်ကြီးတွေ ...ကျွန်မ မယုံနိုင်စရာ ကိုယ့်မျက်စိပဲအကြည့်မှာသွားတာလား..
ကျွန်မ မျက်လုံးကို သေချာပြန်ပွတ်ပြီး သားနဲ့ချွေးမ စားနေတဲ့ ပန်းကန်တွေကိုပြန်ထပ်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။
(ဟင်........သား..သား..ရယ်..မေမေ ..မေမေ.. အကြားမှားတာလားကွယ်.မေမေကို.မေ့မေ့ကို ...)
ကျွန်မဆက်ပြောဖို့အင်းအားမရှိတော့ပါ။ ချွေးမနဲ့သားကိုဖက်ပြီးအားရပါးရ အော်ငိုမိလိုက်ပါပြီ..
(မေမေရယ်..သတိထားပါဗျာ မငိုပါနဲ့တော့.သားတို့ မေမေကို စိတ်မဆင်းရဲစေချင်လို့ မေမေစားလို့မ၀မှာစိုးလို့ ခုလိုမီးဖိုထဲ သီးသန့်စားရတာပါမေမေရယ်..)
(ဟုတ်ပါတယ် မေမေရယ် သမီးလည်း မောင်ဝယ်လာတဲ့ ဟင်းစားလေးကို မေမေ့ကအသက်ကြီးပြီ နုးနုးညံညံလေး
စားလို့ရအောင်ထောင်းကြော်လေးလုပ်ပေးပြီး အရိုးကို သမီးတို့စားဖို့ မုန်ညင်းရွက်လေးနဲ့ အရည်သောက်လေး ချက်ပီး
မောင်ပင်ပန်းတာပျောက်ပါစေတော့ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခု နဲ့ အာသာပြေပြောနေကြတာပါမေမေရယ်)
(သား နဲ့ သမီးရယ်..မေမေ ဒီလိုအတွေးတွေနဲ့ မှားနေတာ နှစ်နဲ့ချီ နေပါပေါ့လားကွယ်..)
သားနဲ့ ချွေးမ တွဲခေါ်လို့ အိမ်ရှေ့ရောက်လာတဲ့ ကျွန်မ အားအင်တွေကုန်ဆုံး နုံးခွေလို့ နောင်တတရားတစ်ခုကို
ကောင်းကောင်းကြီးရလိုက်ပါတယ်..ယောက္ခမ နဲ့ချွေးမကြားမှာရှိတတ်ကြတဲ့ တန်လှန်မူ့လေးတွေဟာ..တကယ်တော့
ကျွန်မ လို သားကိုချစ်စောနဲ့ ချွေးမလုပ်သမျှ ဘာမှအကောင်းမမြင်မိတဲ့ မေမေလို့မခေါ်ထိုက်တဲ့ ကျွန်မလို အမေကြောင့်
(မေမေ ဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နော်..သမီးတို့ နောက်ဆို မေမေနဲ့ပဲ တူတူထမင်းစားတော့မယ်နော်..
ချွေးမလေး ရေခပ်ဖို့ မီးဖိုထဲဝင်သွားပြီး ရေတစ်ခွက် ကျွန်မ အတွက် ပါလာပါတယ်။လက်ထဲကအနွေးထည်လေးအသစ်တစ်ထည် ကိုင်လို့။
( ရော့ ဒါမေမေ့အတွက် သမီးတို့ကန်တော့ဖို့ မနက်ကဈေးကပြန်တော့ဝယ်လာတာ.အနွေးထည်လေးလေ. ညမှမောင့်နဲ့
တူတူ ကန်တော့ဖို့ မောင့်ကိုစောင့်နေတာ ဘုရားသွားကျောင်းတက်ရင် မေမေ မှာအဟောင်းပဲရှိတာ သတိရလိုက်လို့ပါ)
(မေမေ ရယ် မငိုပါနဲ့ )
(သာဓု သာဓု သာဓု ပါကွယ် သားနဲ့ သမီး စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာလို့ လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်စုံကြပါစေကွယ်.)
(ဟုတ်ကဲ့ပါမေမေ မေမေ့အမြင်လေးတွေ ကောင်းဖို့ သားတို့ကို ဒီနေ့ကစအကောင်းမြင်ပေးပါနော် မေမေ)
ကျွန်မ ကိုထိုင်ကန်တော့နေတဲ့ သားနဲ့ ချွေးမ ကိုကြည့်ပြီး အတ္တတရားတွေနဲ့ အရှက်လုံဖို့ သား နဲ့ချွေးမရဲ့ ကရုဏာရှင်မျက်လုံးတွေကြားမှာ ကျွန်မ ပင့်သက်ကိုချွေချွေချရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဓားစာခံလုပ်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်.။
ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း သံသရာတစ်ခုကြား အလိုဆန္ဒက ကိုယ့်ဘ၀ကို မရှင်းထုတ်နိုင်သရွှေ့  မနက်ဖန်အတွက် အရှက်လှုံဖို့ ဘ၀ကောင်းကွက်တစ်ခုမှာပဲ ရှင်သန်ခြင်းနိယာမ နဲ့ အားပေးနေတဲ့ မိသားစုတစ်ခု ကို ကျမ မျက်နှာဘယ်သို့ပြရပါလမ့်မလဲ...?
ကျွန်မ ရဲ့  ညနက်နက်လှိုင်ဂေါင်းတစ်ခုထဲမှာပဲ ကိုယ့်အသံကိုယ်မြိုချနေမိပါတော့တယ်။
ကဲ..ဒါဆိုရင်ကျွန်မအတွက် နေကြည့်မလား သေကြည့်မလား အခြေအနေက အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားမချက်သေးသရွေ့  မျက်ခွန်ကိုတွန်းဖွင့်ရင်း မနက်ခင်းနေခြည်
မှာပဲ ညနေခင်းအကြောင်းကြိုမတွေးပဲ အကြည့်မှာလာငြိနေတဲ့ အာရုံတိုင်းကို အရှိတရားရယ် အသိတရားရယ် အိမ်မှားမ၀င်မိအောင်.
အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုခုထွက်ကြလာဖို့ ကျွန်မ လှမ်းဆွဲမဲ့ အရိပ်ကအကောင်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာပါပဲလေ.။
ဒါဆိုရင် ကျွန်မလိုအမေတွေအတွက် အမြင်ကောင်းအောင် အကောင်းမြင်ဖို့လိုတာပါပဲလား.။
ပို့စ်ရေးသားသူ ဧကရီ ရက်စွဲ Friday, April 22, 2011